Flow With The Sprit Of Water Zavakanto-Bahoaka - Famolavolana
Zavakanto-Bahoaka Matetika ny tontolo fiaraha-monina dia voaloto noho ny tsy fifanarahana eo amin'ny samy mponin'izy ireo izay miteraka korontana hita maso sy tsy hita maso manodidina. Ny tsy fahatsiarovan-tena momba an'io aretina io dia ny fametrahan'ireo mponina ao anaty fiadanam-po. Ity fahazarana sy fihodinana fihodinana ity dia misy fiantraikany amin'ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Ny torolàlana momba ny sary sokitra, ny mariazy, manadio, ary manamafy ny "chi" amin'ny habaka iray, izay mifantoka amin'ny valiny mahafinaritra sy milamina. Miaraka amin'ny fiovana an-kolaka amin'ny tontolo iainany, ny vahoaka dia mizotra amin'ny fifandanjana eo amin'ny toetrany anatiny sy ivelany.
Anaran'ny tetikasa : Flow With The Sprit Of Water, Anaran'ny mpamorona : Iutian Tsai, Anaran'ny mpanjifa : Chang yih hi-tech industrial park.
Zavakanto-Bahoaka Iutian Tsai Flow With The Sprit Of Water